अब केपी शर्मा ओलीको सेटिङले देश चल्दैन : भुसाल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
अब केपी शर्मा ओलीको सेटिङले देश चल्दैन : भुसाल
काठमाडौँ — पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाका नेता घनश्याम भुसालले अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सेटिङले देश नचल्ने बताएका छन् ।
भुसालले सम्बोधनका क्रममा भने, 'अब केपी ओलीका जालझेल र षड्यन्त्रलाई कुनै हालतमा पूरा हुन दिइनेछैन । सबैले केपी शर्मा ओलीले सेटिङ गरिरहेका छन् भन्ने गरेका छन् । तर अब केपी ओलीको सेटिङले देश चल्दैन, सेटिङ त जासुसी उपन्यासहरुमा मात्र सफल हुन्छ ।' '२१औं शताब्दीमा सेटिङ मिलाएर अदालतलाई दबाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम पाल्नु भएको छ भने कमरेड ओली तपाईंले गलत गर्दै हुनुहुन्छ । यसै कारण तपाईं भोलि पराजित हुनुहुनेछ,' भुसालले भने ।
भुसालले सम्बोधनका क्रममा भने, 'संविधानलाई बन्धक बनाएर केपी ओली तान्डव नाच्दै हुनुहुन्छ । विभिन्न जालझेल गरेर भए पनि आफूले जित्ने निश्चित नभएसम्म केपी ओलीले चुनाव गराउनुहुन्न । कसैले चुनावको अपेक्षा गरेका छन् भने त्यो भ्रम हो । चुनाव हुनेवाला छैन ।'
त्यस्तै भुसालले अहिले देशका सामु लोकतन्त्र पराजित हुने वा केपी ओली पराजित हुने भन्ने दुइटा विकल्प मात्रै रहेको पनि बताए ।
प्रकाशित : माघ ९, २०७७ १४:४१
सन्दुक रुइतसहित ३ जना नेत्र विशेषज्ञलाई भिजन एक्सिलेन्स अवार्ड
काठमाडौँ — भिजन एक्सिलेन्स अवार्ड २०२० बाट नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइत, प्रा.डा .रामप्रसाद पोखरेल र डा. गोपालप्रसाद पोखरेल सम्मानित भएका छन् ।
पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवले दक्षिण एसियामै आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अग्रणी भूमिकामा रहेको नेपालबाट ३ जना व्यक्तित्व पुरस्कृत हुनु गर्वको कुरा भएको बताए । ‘आँखा बा’ को रुपमा चिनिने डा. रामप्रसाद पोखरेल नेपाल आँखा अस्पताल तथा नेपाल नेत्रज्योति संघका संस्थापक हुन् । त्यसैगरी डा. सन्दुक रुइत विश्वकै प्रख्यात नेत्र विशेषज्ञको रुपमा चिनिन्छन् । तिलगंगा अस्पतालको संस्थापक रेहका उनी मोतिबिन्दु शल्यक्रियाका नवीनतम प्रविधिका जन्मदाता पनि मानिन्छन् । नेपाल आँखा अस्पतालका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग सम्बद्ध रहेर नेपालको आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो योगदान पर्‍याएका छन् ।
सन् १९९९ मा दक्षिण पूर्वी एसियामा नेपाल पहिलो राष्ट्र बनेको थियो जसले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग मिलेर (आईएपीबी)ले घोषणा गरेको विश्वव्यापी अभियान 'भिजन २०२०: दृष्टि सबैको अधिकार'लाई आत्मसात गरेको थियो ।
प्रकाशित : माघ ९, २०७७ १४:११